Sidee ku ogaab kartaa gabadha ku jecel?? – Filimside.net
Sidee ku ogaab kartaa gabadha ku jecel??
January 3, 2019 Cabdiraxmaan Anteeno
Gabadha jaceylka haayo waxaa jiraan astaamo badan oo lagu garto kuwaasoo kaa caawin karo inaad jaceylkeeda ogaato.
Hadaba waxaan maanta idiin soo gudbin doonaa qaar kamid ah tilmaamaha ugu horeeyo ee gabadha jaceyleeda lagu ogaan karo.
Ka bogasho wacan.
Dhoola cadeynta waxaa lagu tiriyaa tilmaan muuqato taasoo sheegeyso jaceylka gabadha.
Gabadha si aan iska doon doon aheyn ayay u dhoolo cadeyneysaa haduu meesha soo galo qof ay jeceshahay, ama marka ay la hadleyso, sidoo kalana kaftankiisa aad ayay ugu qososhaa taasoo biriqa indhaheeda soo saarto.
Hadii lajoogo meel la buuxo xitaa gabadha waxay soo qooraansataa halka uu joogo wiilka ay jeceshahay iyadoo u dhoolo cadeyso.
Gabadha waxay si qurux badan u fiirisaa indhaha wiilka ay jeceshahay hadii meel lagu badanyahay kula kulanto waxaana u sabab ah ayadoo dooneyso in dareenkiisa soo jiidato.
Lkn inta badan markii ay kali isla yihiin aad ayay u xishootaa marka kaliya ee ay kusoo fiirisana indhahaaga ayay fiirineysaa waayo indhahaaga ayay waxwalba ka akhrisaneysaa.
IN SI JOOGTO ULA XIRIIRTO.
Gabadha jaceylka haya had iyo goor waxay isku daydaa iney xiriir la sameyso wiilka ay jeceshahay iyadoo sidoo kalana weydiiso su’aalo la xiriiri karo dareenkiisa waxyaabaha ku xeeran iyadoo sidoo kalana uga sheekeyso waxyaabo nolosheeda soo qabsaday.
IS RUXITAANKA IYO SOO DHAWAANSHAHA.
Gabadha jaceylka hayo seen bari markii ay agtaada ama meel aad ka arki kartid joogto waxay aad iskugu daydaa in ay kuu soo dhawaato sida in labadiina madax isku soo dhawaadaan ama garbihiina sidoo kalana markey hortaada socoto waxaad socodkeeda ka dareemi kartaa sida xubnaha jirkeeda oo dhami isku ruxayaan si dareenkaaga u soo jiitaan taasina inta badan waa wax uu jaceylka wato ee ma ahan iska yeel yeel iwm.
GABADHA OO MUUQALKEEDA WAX KA BADASHA.
Gabadha markuu jaceyl galo waxay aad ugu mashquushaa iney muuqaalkeeda ku dadaasho sida labiska carafta nadaafada bilicda iwm
JAWAABAHA DAG-DAGA AH.
In gabadha dag-dag kuugu soo jawaabto ama telka si fudud markasta kaaga qabato waxay cadeyn u tahay in gabadhaasi ay ihtimaam ku siineyso waana waxyaabaha ugu waaweyn ee lagu ogaado in gabadhaasi ku jeceshahay waayo inta badan gabdhaha nimanka aysan qiimeynin ama ihtimaam siinin telka dhaqso kama qabtaan sidoo kalana mararka qaar maba u soo jawaabaan hadii aad ku cel celiso kadibna weydiisid maxaa kugu dhacay? Jawab fudud ayay ku siinayaan taasoo ah waan mashquulsanaa.
Hadaba wiilow gabadha ku jecel waxaad ogaataa mashquulkasta oo ay ku jirtaa muhimada koowaad adiga ayay ku siineysaa
Waxaa Aqrisay 682